iTunes inogadziridzwa neshanduko diki kune vhezheni 12.6.1.27 | Ndinobva mac
Vamwe vashandisi vari kugashira iTunes kugadzirisa kune vhezheni 12.6.1.27, isu tinodaro nekuti mune yangu pachezvangu handina iyo yekuvandudza kune iyi vhezheni uye ini ndinopfuurira neyechangobva kuburitswa vhezheni 12.6.1.26 iyo yakaburitswa pamwe neyazvino vhezheni ye macOS yepakati pemwedzi uno.
Mune izvi vhezheni itsva yakaburitswa maawa mashoma apfuura Zvinotaridza sekunge zvimwe zvekuita kweTunes zvakagadziriswa, hapana zvakawanda zvakawandisa zveiyi vhezheni itsva mumanotsi Zvinogoneka kuti panguva yemaawa mashoma anotevera vhezheni itsva ichasvika kune vamwe vashandisi vasina iyo.
Iyo iTunes chishandiso iri, sekureva kwaCupertino's chaiye firm, nzira yakanakisa yekunakidzwa nekuronga mimhanzi yako uye mabhaisikopo. Iyi software isiri yakanakisa yakagadzirwa naApple, kure nazvo, tinogona kutaura izvozvo inoda hukuru hukuru maererano nechero zvemukati manejimendi pachayo, asi mushanduro dzichangoburwa uye nemaapplication chaiwo ekuti ubve zvishoma kubva kuTunes zvinokwanisika kuti pakupedzisira software iyi igare iri yemakopi ekuchengetedza emidziyo yedu uye nezvimwe zvishoma. Parizvino kune vazhinji vashandisi vasina kana kuita makopi muTunes saka tichaona zvinoguma zvaitika nekufamba kwenguva.
Iyi vhezheni nyowani inogona kusvika chero nguva mune yedu Mac App Store uye zviri pachena kuti inogona kuwanikwa senguva dzose mahara. iTunes haisisiri chishandiso chakakosha yeve iPhone, iPad kana vashandisi vePod, asi neimwe nzira inogona kuve yekushandisa kwatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iTunes » iTunes inogadziridzwa neshanduko diki kune vhezheni 12.6.1.27
Apple iri kuyedza tekinoroji ye5G